के तपाइको पनि उपरखुट्टी लगाएर बस्ने बानी छ ? हानिकारक हुनसक्छ है ! - Mitho Khabar
June 26, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on के तपाइको पनि उपरखुट्टी लगाएर बस्ने बानी छ ? हानिकारक हुनसक्छ है !
शनिदेवको दर्शन गरि आज असार १२ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस ।
डाक्टरले भने पछी आखा चि’म्लेर खो’लिदिए.. अ’न्तिम स’म्म यस्तो गरे !(भिडियो सहित)